Wamkelekile ukuba sityelele umnquba No. 5A26-1
ngomphathi ku 20-07-13
Wamkelekile ukuba usityelele kwindlwana engu-5A26-1 Sizokuzimasa umboniso wevalvesi eDusseldorf eJamani ukusukela ngomhla wama-27 ukuya kowama-29 kuNovemba. Wamkelekile ukuba sityelele umnquba No. 5A26-1. Siza kuzimasa umboniso wevalufa eDusseldorf eJamani ukusukela ngomhla wama-27 ukuya kowama-29 kweyeNkanga. Wamkelekile ukuba usityelele ...
Wamkelekile abahlobo ukuba basityelele!
Ixesha elizayo iValve Ball Co, Ltd, eyasekwa ngo-2004, inkampani ineminyaka engaphezulu kwe-10 yamava aphawulekayo ekuveliseni IIMPAWU ZOKUPHILA NEZITULO kunye NEZINYE IINDAWO zeValve Valves. Ukunyamezela kunye nokugxininisa kwenza inkampani enezixhobo ezifanelekileyo kwaye ilawulwa kakuhle. Iqinisekisiwe kwi-ISO9 ...
Ioyile yaseIran, irhasi, ukucokisa kunye nomboniso wepetroli
Siza kuzimasa i-22nd i-Iran ye-Oyile, iRhasi, iMiboniso kunye nePetrochemical Exhibition ukusukela ngomhla we-9 ukuya kwele-9 kuCanzibe ka-2017. Wamkelekile ukusityelela kwiHolo 38, 1638. Malunga noMboniso Umvelisi wesibini ngobukhulu we-OPEC, i-Iran ihleli ngaphezulu kweepesenti ezili-11 zeoyile kunye neepesenti ezili-18 zoovimba begesi ehlabathini. Qho ngonyaka, i ...
Inkampani iya kuya kwi-PCVExpo 2016 eMoscow
Umboniso wePCV ngumboniso wezorhwebo wamanye amazwe weempompo, iicompressors kunye nezivalo. Oku kufanelekileyo liqonga lolwazi elibalulekileyo malunga nemicimbi yezixhobo zomoya, iivevini, iinjini kunye neenjini. Abavelisi bamazwe aphesheya abakhona kwi-Expo PCV izinto zabo ezintsha kunye neetekhnoloji kwi ...